“Can 2019”: hahazo 1.500.000 dôlara ny Barea raha mandresy an’i Tonizia | NewsMada
Araka ny vaovao, nivoaka omaly, tao anaty tambanjotran-tserasera, dia nampahafantarin’ny Caf, ho an’ireo ekipa rehetra nandray anjara, tamin’ity “Can 2019” ity, ny “prime”, homena azy ireo. Raha ho an’ny Barea de Madagascar, manokana, efa nahazo 800.000 dôlara izy ireo, noho ny nahatafita azy, teo amin’ny dingana ampahefa-dalana. Mbola hiakatra, 1.500.000 dôlara izany, raha mandresy an’i Tonizia, rahampitso alakamisy. Ry zareo Tonizianina, ekipa azon’ny Barea, resena tsara araka ny fahitan’ireo teknisianina sy ny mpanao gazety, avy any ivelany azy. Lasa, 2.000.000 dôlara io “prime” io, raha tonga eo amin’ny famaranana ny Barea ary tafakatra 4.000.000 dôlara izany raha toa ka mandrombaka ny amboaran’i Afrika, ny Barea de Madagascar.
Mbola lavitra anefa ny lalana hahazoana izany, hatreto fa mila ezaka goavana. Raha tsiahivina, efa niatrika ny fanomanantena ny Barea, nanomboka omaly talata taorian’ny fialan-tsasatra, nomena ireo mpilalao ny alatsinainy, lasa teo. Tsiahivina fa ao amin’ny kianja Cairo Stadium, no hanatontosana ny lalaon’ny roa tonta, rahampitso alakamisy, manomboka amin’ny 10 ora alina.
10 tapitrisa ariary isaky ny baolina maty
Ny talata lasa teo, niatrika ny fiofanana momba ny “arbitrage video” (Var), hiasa manomboka amin’ity ampahefa-dalana ity, ireo mpilalaon’ny Barea, rehetra mba tsy hanavao, amin’izany. Toy izao, àry ny fandaharan-dalao eo amin’ny dingana ampahefa-dalana, hatao anio alarobia 10 sy rahampitso alakamisy 11 jolay, ho avy izao.
Tsiahivina fa efa nahazo vola 10 tapitrisa ariary avy amin’ny mpanohana isaky ny baolina maty ireo mpilalaon’ny Barea. Hatreto, nahatafiditra 11 izy ireo. Izany hoe efa nahazo 110 tapitrisa ariary izy ireo mialoha izao dingan’ny ampahefa-dalana izao… Mbola hisy mpanohana hafa koa hanome tambiny azy ireo.
Alarobia 10 jolay
Kianja 30 jona
07:00 hariva – Sénégal # Bénin
Kianja iraisam-pirenena Le Caire
10 :00 alina – Nizeria # Afrika Atsimo
Alakamisy 11 jolay
Kianja New Suez Stadium
07:00 hariva – Côte d’Ivoire # Alzeria
Kianja Akademia Miaramila Le Caire
10 :00 alina – Barea # Tonizia